Nduku na-eto eto nke Republic of Kazakhstan
N'akụkụ a, anyị na-ekerịta ozi gbasara otu esi eto nduku na-etolite n'akụkụ dị iche iche nke Russia. Ma nke a oge ha kpebiri ịgafe ókè ha na-emebu n'echiche niile ma tinye akụkụ dị mkpa nke esemokwu ahụ na Kazakhstan - agbata obi ndịda nke Russia, nke na-enwebeghị mbụ aha nke "nduku na-eto eto" na akụkọ ntolite, mana jisiri ike tụgharịa site na onye mbubata mbubata n'ime onye na-ebupụ poteto n'ime obere oge.
Kairat Bisetaev, Onye isi oche nke Board
Union nke nduku na akwukwo nri growers nke Kazakhstan
Kairat Bisetaev, Onye isi oche nke Board of Union of Potato and Vegetable Growers of Kazakhstan, na-akọ maka otu mba si jisie ike nweta ụdị ihe ịga nke ọma na ọrụ ndị ọ ka nwere idozi.
Banyere rụzuru na ntakịrị banyere ọnụ ọgụgụ
Kazakhstan ka mgbe niile mbubata-ndabere maka nduku. N'oge Soviet, anyị natara poteto site na Belarus, na oge Soviet - site na mba ndị agbata obi.
Industrylọ ọrụ nduku natara nnukwu nkwalite maka mmepe na 5s. N'oge a, mgbake akụ na ụba izugbe malitere na Kazakhstan ma a na-agbaso amụma otuto tozuru etozu: enyere ego ego maka afọ 7-4 na 2008% kwa afọ. Mmemme mgbazinye abaghị uru. Na ọnọdụ nke "ego dị ọnụ ala" ọ dịtụ mfe ịmalite azụmaahịa, yana site na 2010-XNUMX, mmadụ nwere ike ikwu maka nsonaazụ mbụ pụtara ìhè. Agbanyeghi n’oge ahụ Kazakhstan ka na-adabere na mbubata mba ofesi: kemgbe ọnwa Jenụwarị, a na-ebubata mba ofesi site na Pakistan, Iran, China, na-akpọghị Kyrgyzstan na Russia ọnụ.
Site na 2016-17, ndị na-akụ nduku Kazakhstan, na nke mbụ ya na akụkọ ntolite nke mba ahụ, jisiri ike nye ngwaahịa ụlọ ụlọ na iwepụ mbubata. Ọzọkwa, ọnụego nke ego ahụ nyere anyị ohere ikwu maka nnukwu mbupụ nke mbupụ. N’ezie, gọọmentị na azụmaahịa nwere ike ikwu na ọ bụ ihe ha rụzuru bụ eziokwu.
Ugbu a, na mba ugbo ugbo (bụghị agụta onye ugbo nke onwe nke ụmụ amaala) banyere 25 puku hectare na-ekenyela maka poteto, mpaghara a dum dị n'okpuru mmiri. Ndi a puku 25 hectare na-eri nri dum bi n'obodo ukwu nke Kazakhstan, ma e wezụga, anyị nwere ike mbupụ 200-300 puku tọn.
Onu ogugu nduku bu 35-37 t / ha. Echere m na nke a bụ ezigbo nsonaazụ, afọ ise gara aga n'ọtụtụ ugbo mkpụrụ ahụ agafeghị 30 t / ha, mana kemgbe ahụ ikike nke ndị na-eto eto nduku amụbaala nke ukwuu. Echere m na ọ bụrụ na n'afọ ndị na-abịanụ, enweghi nsogbu dị egwu na azụmahịa anyị "site n'èzí", nkezi mkpụrụ ga-eru 40 t / ha. Agbanyeghi na enweela ugbo ugbua na obodo na-ewe ihe dika 50-55 t / ha nke obula, ma anyi kwenyere na nke a bu ihe nlere anya nke odi nkpa igbali.
Mkpokọta ibu nke owuwe ihe ubi, dị ka data ndị ọchịchị si kwuo, bụ ihe dị ka nde tọn 4 nduku (na ugbo nke ụdị niile). N'ezie, echere m na ọ karịrị nde tọn 2-2,2. Na nwute, ọdịnala ịgụta "ya na njehie" ka echekwara na mba anyị kemgbe oge Soviet, mana n'ọdịnihu dị nso anyị ga-ewepu ya: a na-ebute ụzọ dijitalụ na mba ahụ, ihe ndekọ nke ala niile na-aga n'ihu. Ekwenyesiri m ike na nke a ga-enyere aka dozie nsogbu ahụ site na ọnụ ọgụgụ na-enweghị isi.
Europe na-eto mkpụrụ na-eto ma na-azụlite site na iji azụmaahịa
Kemgbe mmalite afọ 2000, ndị na-akụ nduku na Kazakhstan adaberewo n'ụdị nhọrọ ndị Europe nke na-arụpụta ihe n'oge a. Ugbu a, òkè nke ụdị ndị a dị n'ubi karịrị 90%, a na-ebubata mkpụrụ dị ịrịba ama kwa afọ site na Germany na Netherlands. Nke a bụ nnukwu nsogbu mba anyị.
Kazakhstan emepewo mmemme maka mmepe nke nduku na ịmị mkpụrụ, mana e mere ya maka ogologo oge itinye ya n'ọrụ, ma ruo ugbu a anyị nọ na mmalite nke ụzọ a.
Otu ọrụ dị mkpa anyị nyere maka ọdịnihu dị nso bụ mmụba dị ukwuu nke mkpụrụ poteto amịpụtara na mba anyị.
Kazakhstan nwere ọtụtụ uru maka mmepe nke ịmị mkpụrụ. Anyị enweghị oke nke ókèala (dịka, dịka ọmụmaatụ, na Netherlands), ya bụ, enweghị nsogbu na nnabata na ntụgharị mkpụrụ osisi anọ. The pluses gụnyere sharply kọntinent ihu igwe: obi ọjọọ oyi na-enyere tufuo ọtụtụ pathogens, na akọrọ summers-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchịkwa nje na fungal ọrịa. N’iburu nke a n’uche, o doro anya na n’ọnọdụ dị ala (ihe na-erughị ka ọ dị n’ọtụtụ mba Europe) anyị ga-enweta nnukwu owuwe ihe ubi dị mma.
Anyị na-atụ anya ịdọrọ uche nke ndị na-azụ Europe ka anyị wee nwee ike itolite ụdị mkpụrụ nduku Europe na mpaghara anyị, wee ree ha ọ bụghị naanị na Kazakhstan, kamakwa na mba ndị dị na Central Asia na Russia.
A na-eme ụfọdụ usoro nduzi a. Ya mere, ndị nnọchi anya Kazakhstan (ndị nnọchi anya azụmahịa, Ministrị Ọrụ Ugbo) gara Netherlands, zutere ndị na-azụ anụ, ndị nnọchianya nke NAK (Ọrụ Nnyocha Isi nke Netherlands maka Njikwa Ogo nke Mkpụrụ Ihe), tụlere ohere nke imekọ ihe ọnụ. Anyị hụkwara mmasị na Europe.
Ugbu a, anyị ga-agafe ọkwa abụọ dị mkpa tupu mmalite ọrụ ọrụ ọnụ.
Nke mbu bu isonye UPOV (ndi n’etu maka nchekwa nke ndi nzulite ikike iche-iche) Nke abụọ bụ imepụta sistemụ asambodo nke anyị (ọ ga-adabere n'usoro NAK nke emegharịrị n'ọnọdụ anyị).
Ekwenyesiri m ike na ihe a niile nwere ike ime, nke pụtara (megide ndabere nke ihu igwe na-adọrọ adọrọ na Kazakhstan n'ozuzu ya), a ga-etinye atụmatụ maka mmekọrịta.
Ma na-ekwu maka mkpa ọ dị ịdọta ndị ọkachamara na Europe, mkpa ọ dị ịkọpụta ụdị European dị iche iche n'ókèala anyị, anyị echefughị ​​banyere nhọrọ anyị. Ugbu a, ụdị poteto iri atọ abanyela na Register nke Mmezu Okike nke Kazakhstan. Anyị chọrọ ịgbasa ndepụta a, mana ụdị Kazakh ọhụrụ kwesịrị ịdị nhata na njirimara ya na ndị mba ọzọ kachasị mma.
Kedu ụdị poteto ndị na-akọ ugbo ọgbara ọhụrụ chọrọ itolite na Kazakhstan?
Nke mbu, anyi choro oge mbu na etiti oge - nke a bu aririo site na ugbo nke ugwu ugwu nke Kazakhstan (ebe isi ulo oru "nduku" di). Achọpụtara m na enweghị ụdị dị iche iche maka akụkọ ihe mere eme: oflọ Ọrụ Nduku na akwukwo nri na-eto eto nke Kazakhstan dị na Almaty, ya bụ, na ndịda obodo ahụ. Ndị ọkà mmụta sayensị nke ụlọ akwụkwọ ahụ na-elekwasịkarị anya na iche maka ịkọ ihe na ndịda.
Nke abuo, iche nwere anụ edo edo na-achọ na ahịa, nke a bụ omume nke afọ 7-8 gara aga.
Nakwa na ndepụta nke àgwà ndị dị mkpa nke ngwaahịa a bụ mkpụrụ dị elu, nkwupụta magburu onwe ya (ọtụtụ ụdị ụlọ dị iche iche bụ ndị ama ama maka uto mara mma, mana n'otu oge ahụ nwere mkpụkọ na-enweghị atụ na anya miri emi, nke na-egbochi nduku Kazakh ịsọ mpi na ndị Europe), ịdị mma dị mma, iguzogide ọrịa na pests.
Nke a abughi nani ihe ndi oru ugbo choro, kama o bu ihe omume.
Na Jenụwarị 2020, ndị nnọchi anya azụmahịa sonyere na nke mbụ na nzukọ nke Council Council nke Institute of Potato and Vegetable Growing of Kazakhstan. Ndị isi nke ụlọ ọrụ ugbo nwere ohere ikwu maka mkpa ha ma mee mgbanwe maka atụmatụ ọrụ nke ndị na-azụ ihe maka afọ ndị na-abịanụ. Enwere m olileanya na ịrụ ọrụ na mkparịta ụka, anyị ga-enweta ezigbo nsonaazụ.
Dịka m kwuchara, mkpụrụ nduku na-arịwanye elu na Kazakhstan kemgbe afọ atọ gara aga. Mana ihe ngosi ndị a rụpụtara abụghị njedebe, ha nwere ike ịbawanye ma ọ dịkarịa ala otu oge na ọkara, nke pụtara na enwere ike ịnweta ngwaahịa ngwaahịa ọzọ nke 400-450 ọbụna na-enweghị mmụba na mpaghara. Isi ọnọdụ a bụ elu-edu osisi nke ukwuu na-arụpụta iche.
Ala na mmiri dị ka ndị isi na-ebute uto
Otú ọ dị, ebe a ga-abawanye. Kazakhstan nwere ala ebe ọ na-azụ ahịa na mmiri zuru oke iji nọgide na-azụlite mmiri.
Nduku na-eto na Kazakhstan bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto na-eto eto na-azụ ahịa. Mgbe ọrụ ugbo mara mma, ndị na-abụghị ndị na-achụ ego na mbụ chọrọ itinye ego na mmiri, na-achọpụta na ahịhịa niile dị na Kazakhstan dị na mpaghara nke ugbo egwu. N'ime oge mmepe niile (site na mmiri ruo August gụnyere), mba ahụ, na nkezi, na-enweta site na 50 ruo 150 mm nke ọdịda, yabụ ịgba bụ nzọpụta anyị. Yabụ, mmepe mmepe mmiri nwere ike ikpebi ịma mma nke ọrụ ugbo na Kazakhstan.
Taa ka akwadoro atumatu steeti di iche iche maka mmepe nke mmiri na mmiri. Ugbu a na mba ahụ enwere ihe dị ka hectare 1200-1300 puku n'okpuru mmiri, site na 2027 ọrụ bụ ịbawanye mpaghara ndị a, nke a bụ ihe ezi uche dị na ya.
Ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ewebata ogbugba mmiri n'ubi, nke mbụ, ha chọrọ itolite poteto na akwụkwọ nri nke borsch set, n'ihi na ihe ọkụkụ ndị a na-enye nloghachi kachasị elu (ọkachasị n'akụkụ ugwu nke Kazakhstan, ebe anyị nwere akụ mmiri kachasị ukwuu).
Nchekwa. A na-enye ụlọ ahịa nduku na ọnwa 10 kwa afọ
Enweghị m ike ịsị na Kazakhstan edozila okwu nke inyefe ebe nchekwa nduku oge a. Anyị nwere ọtụtụ ọrụ. O sina dị, ndị ọrụ ugbo n'ụzọ zuru ezu na-enye anụ ụlọ ahịa na nduku dị mma site na etiti July (site na mmalite nke owuwe ihe ubi n'oge nduku) ruo Eprel.
Enwere ike imechi May enweghị nsogbu. Ma, n'oge a, poteto ohuru sitere na Uzbekistan na-amalitekarị ịbịakwute anyị, ọ nweghịkwa isi na ha na ngwaahịa nke ihe ubi ochie ahụ. Site n’etiti ọnwa Mee rue etiti Julaị, anyị na-ere poteto ọhụrụ site na mba ndịda ndịda ma anyị chere na ọ dị mma.
Ahịa n'ahịa isi awọ
Na ụta, enwere m ike ịmara na n'oge ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ poteto niile a na-akọ na ugbo Kazakh (yana akwụkwọ nri borscht) na-ere ahịa. Ọbụna ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na Moscow (ọ dịkarịa ala 80%) na-ahọrọ ịzụta "ngwaahịa ruru unyi" na bazaa - ya bụ, na ebe ndị na-enweghị usoro ịkwụ ụgwọ na-arụ ọrụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọta ọnụ ọgụgụ nke ndị nnọchiteanya.
Nke bụ eziokwu bụ na nnukwu ụlọ ahịa na-ekewa poteto dịka ngwaahịa nke ga-anọrịrị na ụdị, ha anaghị adabere na uru sitere na ya, yabụ ha na-azụta "site na ndị ọzọ." N'ihi ya, àgwà nduku dị anya site na mgbe niile na ụlọ ahịa shelves, ọ bụ ezie na ha na-emepụta na zuru ezu quantities.
N'ezie, enwere ndị ọzọ: otu netwọkụ azụmaahịa na-azụta poteto ozugbo site n'ugbo ndị so na Union maka afọ anọ ugbu a, ma were ngwaahịa a otu n'ime ndị ga-enweta ego. Netwọk ahụ na-ewuli iwu iwu ọnụahịa, na-asọmpi na bazaars, ọ na-emekwa nke ọma. Ma rue ugbu a nke a bụ ihe dịpụrụ adịpụ.
N'ozuzu, ọnọdụ mgbe enwere isi awọ n'etiti onye ọrụ ugbo na onye ikpeazụ zụrụ ngwaahịa ahụ, nke na-emetụta oke ọnụahịa, ugbu a anaghịzi adabara onye ọ bụla. Adị atụmatụ a anaghị eme ka onye ọrụ ugbo na-enweta ego, ngwaahịa ya anaghị adịkwa mfe ịnweta ndị bi na ya.
Anyị nwere olile anya na Mịnịsta Azụmaahịa a haziri na nso nso a nke Kazakhstan ga-enye aka idozi ọnọdụ ahụ, nke ga-eji ọkaibe na-akwalite ngwaahịa ugbo, gụnyere na ahịa ụlọ.
Ndị otu ndị ọrụ poteto na akwukwo nri na-arụ ọrụ ugbu a na ozi ọhụrụ iji wuo ụzọ nnweta, na-eme ka nghọta ha pụta na ọkwa niile. Anyi choro ka ndi ahia niile ghota: ebe akara aka na ihe kpatara ya, na ugwo ahia nke ndi ahia zitere ya na ihe ndi ozo nke ya.
Ego ole bụ "tiketi mbata" maka azụmaahịa ahụ na n'ọnọdụ ole ka itinye ego na-akwụ ụgwọ? Ntughari uche na onu ahia nduku
Nduku na-eto eto bu oru siri ike nke choro itinye ego buru ibu na mbu. Anyị chọrọ akụrụngwa pụrụ iche, akụrụngwa mmiri, nchekwa. "Tiketi nnabata" dị oke ọnụ. Dị ka a na-achị, onye na-azụ ihe nduku na-amalite ịmalite iji ego gbazinye ego. Ọ dịkwa ezigbo mkpa na n'oge a na-arụ ọrụ ego a (dịka iwu, ọ bụ afọ 5-7), ahịa na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ. Nke ahụ bụ, onye ọrụ ugbo ga-enweta ngwaahịa dị elu na nnukwu mpịakọta, ahịa ga-azụkwa ngwaahịa a na ọnụahịa nke ga-enye onye nrụpụta uru. O di nwute, ma nke mbu ma nke abuo adighi eme.
Iji malite, mgbe mmadụ nwetara ihe ọ bụla ọ chọrọ iji bido, ọ nweghị ego na-ahapụ maka mmefu. Na ọnọdụ anyị, iji tolite ezigbo owuwe ihe ubi nke poteto, ọ dị mkpa itinye ego maka 1 nde tenge kwa hectare n'oge a (maka ịtụle: mgbe ị na-eto ọka, ọnụahịa dị ihe dị ka 1 puku tenge / ha, mmanụ - 30 puku tenge / ha). Nke a bụ nnukwu ego, ọ dịkwa mkpa maka ugbo ahụ ịzụrụ fatịlaịza, akụrụngwa nchekwa, wee megharịa mkpụrụ n'oge. Ọ bụghị mgbe niile ma ọ bụghị mmadụ niile na-eme nke ọma. Mana ọ bụrụ na onye ọrụ ugbo, n'ihi enweghị ego, malitere ime ka teknụzụ dị mfe, mkpụrụ ya dara, onye na-emepụta ahụ anaghịkwa enweta ego ga-enyere ya aka ijikwa ego mgbazinye ego dabere na ya.
N'aka nke ọzọ, ọ na - eme na ala ubi siri ike nke nwere oke ego na - arụ ọrụ na - enweta nnukwu owuwe ihe ubi nke poteto dị elu, mana enweghị ike ire poteto toro eto na uru: na ọnọdụ mgbe ahịa ụlọ na - achịkwa ma na - ebupụ na - ebupụghị, ọnụ ahịa nduku anaghị enye uru.
Mgbanwe ego na-enye nnukwu nsogbu maka ndị na-akụ nduku. Anyị na-arụ ọrụ na teknụzụ Europe na America, zụta ngwaahịa ngwaahịa osisi Europe na mkpụrụ. Ma anyị na-ere ihe ka ukwuu nke ihe ọkụkụ na ahịa ụlọ. Mgbe tenge dara, ọ na-akụrisị nduku profitability siri ike.
N'oge na-adịbeghị anya, eserese eserese na Kazakhstan, na-egosipụta mmụba nke ọnụahịa maka ngwongwo na nkata ndị ahịa n'ime afọ 10 gara aga. N'oge a, mba ahụ enwetawo ọtụtụ: jumps na ọnụego mgbanwe, onu oriri. Ọtụtụ ngwaahịa ndị dị mkpa ebiliwo ọnụ mgbe ụfọdụ. Ma nduku weere akara ikpeazụ na ogo a, ọnụahịa ha rịrị elu naanị 46%.
Ọzọkwa, mgbe ị na-edepụta usoro ihe omume ahụ, n'ihi ihe ụfọdụ, a naghị etinye uche na ndị na-egosi 2018 (ọ na-esiri nnọọ ndị na-akụ nduku ike n'ihe banyere ịdaba) Ọ bụrụ na e buru ha n'uche, uto maka nduku ga-abụ pasent 20.
Anyị na-arụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ mgbe ahịa na-ekpebi ego. Mana odi nkpa ighota na oburu na ndi oru ugbo enwee nsogbu ha, ha nwere ike tufue obodo ha oge ufodu. N’uche m, ndị isi kwesịrị ịchịkwa ọnọdụ a.
Ọ dị mkpa ịzụlite ozuzu nke anyị, ịmepụta nhazi, iji rụọ ọrụ ọla na ahịa ndị ọzọ - nke a bụ usoro ga-enye anyị ohere iwusi ike na ịzụlite ụzọ nduku nduku na mba ahụ.
Mbupụ. Na-elekwasị anya na ndị agbata obi kacha nso
A maara na uto ihe ubi na-ebute nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na mba ahụ enweghị usoro echepụtara nke ọma maka ire ahịa ihe ọkụkụ. Site na echiche azụmaahịa, Kazakhstan chọrọ amụma nchekwa ahụike dị mma iji kwalite ngwaahịa anyị n'ahịa mba ọzọ.
Anyị niile ghọtara na poteto abụghị ngwaahịa a ga-ere ahịa gburugburu ụwa. Nke a bụ ngwaahịa dị na mpaghara nke ndị agbata obi kacha nso chọrọ. Ọ bụ ha na-eduzi anyị.
Otu n'ime ntụziaka kachasị mkpa maka anyị bụ Uzbekistan. Kwa afọ mba a na-ebubata 300-400 puku tọn nke ngwaahịa (na mgbe ụfọdụ ruo 500 puku tọn). N'otu oge ahụ, oke olu nke nduku sitere na Kazakhstan ruo Uzbekistan agafebeghị puku tọn 269. Enwere ohere itolite. Ọnọdụ ala nke mba anyị, mpịakọta mmepụta na ogo ngwaahịa na-enye anyị ohere, site na iwu mbupụ zuru oke, ịnye ihe ruru 300 puku tọn na Uzbekistan.
Ahia ahia Russia abughi ihe na-adighi nma maka Kazakhstan. N'ezie, ọtụtụ nduku na-eto na Russia: anyị na-ahụ ma ihe ndị na-agbanwe agbanwe nke mkpụrụ na-eto eto na nkwụsị mgbe niile na mbubata mbubata. Ka o sina dị, Russia na-azụta nduku na mba ọzọ na ọtụtụ (na ọnụ ọgụgụ nke Kazakhstan).
Na mgbakwunye, ekwesiri ighota na na ogbugba mmiri nke Russia emeputara nke oma na etiti mba a, ma na Ural, na Western na Eastern Siberia, a na - etolite nduku na - enweghi mmiri, enwere ihe ubi akuku, ebe mpaghara ndi a bu ahia di nma. Anyị na-ahụ niche anyị ebe a. Site n'echiche akụ na ụba, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnye nduku na mpaghara ndị a site na mpaghara ugwu nke Kazakhstan karịa Bryansk ma ọ bụ Chuvashia.
Site na ndokwa arụ ọrụ ruru eru, nyere ụfọdụ uru ndị Kazakhstan nwere dị ka onye otu Eurasia Economic Community, anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na netwọkụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Russia. Ugbu a, anyị anaghị eme nke a maka ebumnuche dị mfe: enweghị ndị na-anọchite anya ya ezughị. Anyị nwere ndị na-emepụta ngwaahịa na-eto eto mara mma ma mara otu esi echekwa ha. N'akụkụ Russia, e nwere ndị na-azụ ahịa (ụlọ ahịa mkpọsa) ndị dị njikere ịnabata ngwongwo ma nwee mmasị na ya. Mana ịnye ngwaahịa maka ụdọ mkpọsa bụ okwu siri ike, enwere ọtụtụ nuances, ọ bụ azụmahịa dị iche. Chọta ndị chọrọ ime ya bụ ọrụ dị iche anyị na-enweghị ike idozi.
Ebe nke atọ nwere ike ibupụ bụ China. Na mba a, usoro nke mbenata ala ubi na-arụsi ọrụ ike (n'ihi mmepe obodo, iwu nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe), enwekwara nsogbu nke mmebi ala - na ihe a niile megide ndabere nke ọnụ ọgụgụ na-eto eto mgbe niile. Kwa afọ, ajụjụ a na-akawanye njọ: kedu ka esi esi nye ọnụ ọgụgụ mmadụ nri? Ndị ọkà mmụta sayensị nke mba ahụ kwenyere na azịza ga-ekwe omume nwere ike ịbụ nhazigharị ihe oriri nke ndị bi na mba ahụ (ngwaahịa bụ isi ekwesịghị ịbụ osikapa ọ bụla, kama ọ ga-abụkwu poteto dị elu karịa kalori).
N'otu oge ahụ, o doro anya na na mpaghara dị adị, mmụba nke oriri nduku site n'aka nwa amaala ọ bụla, ọbụlagodi site na 1 n'arọ kwa afọ, bụ mmụba nke 1,5 nde tọn n'otu oge, nke na-emepe atụmanya dị ukwuu maka ndị na-ebupụ ya. Enweghị ike iwepụ ya na atumatu nke ịgbanwe nri na mba a ga-etinye ngwa ngwa karịa usoro mmepe mpaghara ọhụrụ. Ndị na-akọ ugbo anyị ga-adịkwa njikere maka nke a.
Ntughari. Anyị na-emepụta site na ọkọ
Na nhazi, ihe niile dị ntakịrị karịa ugbu a.
Na 2016, Union of Potato and Vegetable Growers of Kazakhstan kpọrọ otu n’ime ndị na-arụpụta nduku kacha ukwuu n’ụwa - ụlọ ọrụ Dutch ama ama ka ọ bịa na mba anyị. Anyị gosipụtara ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ ugbo anyị, ndị ọkachamara ahụ nwere ekele maka mbọ anyị rụzuru na ikike anyị. Na afọ ole na ole - mgbe anwalechara ụdị pụrụ iche na mpaghara niile nke mba ahụ - na nnukwu atụmanya anyị.
Companylọ ọrụ ahụ kpebiri imeghe osisi dị na ndịda nke mba anyị, na mpaghara Almaty, ebe ọ bụ na ọ tụgharịrị na ọ bụ ebe a ka nduku maka nhazi n'ime fries na-egosi nsonaazụ kacha mma: ihu igwe na ala na-eme ka o kwe omume inweta mkpụrụ nke 100 t / ha.
E kpebiri ebe a ga-ewu ya, ego kwetara. Mana oru ngo etinyebeghi aka. Nsogbu bụ isi bụ na n'ebe ndịda Kazakhstan enweghị nnukwu ugbo nduku dị njikere ịkwado ọrụ dị mkpa nke ndị na-eweta ihe ọkụkụ maka osisi ahụ. Ọ dị mkpa nke mbụ iji zụlite mmepe nke isi mmalite. Ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ahụ adịla njikere ime nke a, mana n'afọ a, ọrịa na-efe efe abụrụla ihe mgbochi ịmalite ọrụ.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe na ha ji okwu a kpọrọ ihe, anyị na-atụ anya nke kacha mma. Ọrụ a dị ezigbo mkpa maka mba a: ọ nwere ike inye nnukwu nkwado na mmepe nduku na-eto eto na mkpokọta, yana nhazi ụlọ ọrụ nhazi. Ka anyị ghara ichefu na Kazakhstan na nke a dị iche na Russia, ebe enwere ọdịnala nke imepụta ngwaahịa sitere na poteto (stachi, dịka ọmụmaatụ), enwere ụlọ ọrụ (ọ bụ ezie na ọ bụ oge ochie, kemgbe Soviet), enwere ụlọ ọrụ nyocha na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ndị a - nke pụtara enwere ndị ọkachamara, teknụzụ na ahụmịhe. Anyị kwesịrị ịmepụta ihe niile site na ncha.
Oge 2020. Oge mgbake
Afọ a ewetala ọtụtụ nsogbu nye mmadụ niile.
Echetara oge opupu ihe ubi site na iwebata kwarantaini ma ókè-ala mechiri gburugburu ụwa. Anyị kwesịrị ịsọpụrụ gọọmentị anyị maka ụtụ: ka mkpọsa ịgha mkpụrụ ga-ewere ọnọdụ, njikwa usoro ọrụ na Machị, Eprel na Mee ka emere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro eji aka. Onye ọ bụla akim na mpaghara ahụ na-ekwurịta okwu na ngalaba omenala niile dị na mpaghara mpaghara ya, a na-edozi okwu ọ bụla ngwa ngwa. Etufuru efu, mana ebubatara mkpuru niile nke mkpụrụ osisi biara na Europe na oge.
Kemgbe Eprel, ọkụ na-adịghị ahụkebe malitere na mba ahụ, nke wepụtara ọnwa atọ. Ikuku ikuku ruru 15%, ụwa dị ọkụ ruo 60 Celsius С. A ghaghị ịmalite ịgbara mmiri otu ọnwa tupu oge mbụ. Ka o sina dị, anyị nwetara ezigbo owuwe ihe ubi nke poteto - dịka ọnụọgụ ikpeazụ, anyị wee ihe dị ka puku tọn 900 na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nke a abụghị nsonaazụ kachasị elu ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ihe ngosi maka afọ ise gara aga, mana ọ na-enye anyị ohere ịnye ihe siri ike maka ahịa ụlọ na mbupụ ọzọ 250-280 puku tọn na mba ọzọ.
N'ime usoro dị mma n'afọ a, enwere m ike ịlele ọnụahịa dị elu maka ngwaahịa anyị.
N’ime afọ atọ gara aga, ndị na-akụ nduku nọ n’ọnọdụ siri ike nke obere - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu - uru, na 2018 ọtụtụ n’ime ha nọrọ na mwepu dị oke njọ. Ma ugbu a, anyị nwere olile anya na n'ihi ezigbo ọnụ ahịa nke afọ a, anyị ga-enwe ike 'ịkwa ọnya ọnya anyị': wepu mgbazinye ego na-enweghị isi, rụkwaa akụrụngwa, ma wusie ike na nri na nchekwa osisi. N'oge a anyị enweghị ohere ikwu maka mmepe, ebe anyị na-ekwu maka mweghachi.
N’ezie, n’ozuzu, akụkọ ihe mere eme nke nduku na-eto eto na Kazakhstan bụ ezigbo ihe atụ nke ịmekọrịta ihe ịga nke ọma nke atụmatụ onwe onye, ​​ọnọdụ itinye ego na ọdịdị na okike nke ụlọ ọrụ ọhụụ. Ma nke a bụ mmalite!
Oriri ngwakọta akwukwo nri friji na Russia site na 2016 ruo 2019 mụbara ugboro 3,6
Cusstụle ekwe nduku iche
Egburu ihe dịka puku tọn 600 nduku na mpaghara Pavlodar nke Republic of Kazakhstan
Regionlọ ọrụ Moscow Region ga-eweghachi nchekwa nduku nwere ikike nke 10,4 puku tọn